स्वास्थ्य || Rising Khabar
काठमाडौँ, १७ साउन । नेपालमा शिशु जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान गराउनेको संख्यामा सामान्य सुधार आएको छ । सन् २००६ मा एक घण्टाभित्रै स्तनपान गराउने दर ३५ प्रतिशत रहेको थियो र सन् २०१६ मा सो संख्यामा वृद्धि भई ५५ प्रतिशत पुगेको ...
पर्सा, १८ माघ । नेपालबाट भारततर्फ हुने लागुऔषध ओसार पसारमा कारोबारीहरूले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको प्रयोग गरिरहेको खुलासा भएको छ । वीरगन्जको रजतजयन्ती चोकबाट साढे दश किलो चरेससहित आठमहिने शिशुकी आमालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरेपछि सो तथ्य खुलेको हो ...
चितवन, ८ माघ । राष्ट्रिय एचआइभी/एड्स महासंघको दुईदिने भेला ११ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार यहाँ सम्पन्न भएको छ । घोषणपत्रमा एचआइभी संक्रमितलाई परेका समस्या उजागर गरिएको छ । देशभरबाट भेला भएका संक्रमितका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो क्षेत्रमा परेका समस्या उठान ...
बैतडी, ५ माघ । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाले छोरी जन्माउने आमालाई एकहजार भत्ता दिने निर्णय गरेसँगै हालसम्म ४८ जना आमालाई प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा आएर छोरी जन्माउने ४८ आमालाई नेपाल सरकारले दिँदै आएको संस्थागत सुत्केरी भएकोमा एक हजार ...
काठमाडौँ, ३ माघ । पछिल्लो तीन वर्षमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट करिब २०० नर्स विदेश पलायन भएका छन् । अन्य अस्पतालमा भन्दा राम्रो सेवा सुविधा दिने अस्पतालका रुपमा चिनिएको शिक्षण अस्पतालमा पनि सन्तुष्ट हुन नसकेपछि नर्सहरु राजीनामा दिँदै विदेश पलायन ...
काठमाडौ २८ पुस । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले हालसम्म ३८६ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द श्रेष्ठले २०६९ वैशाख ११ गतेदेखि सेवा सञ्चालन गरेको केन्द्रले हालसम्म ३८६ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको ...
प्रसूति गराउँदा शिशुको हातै भाँचियो
काठमाडौ २४ पुस । विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मीले एक महिलाको प्रसूति गराउने क्रममा शिशुको हातै भाँचिदिएका छन्। मोरङको सुन्दरहरैंचा ३ की ३४ वर्षीया तारा आछामीको प्रसूति गराउने क्रममा स्वास्थ्यकर्मीले शिशुको हात भाँचिदिएका हुन्। यो खबर किशोर बुढाथोकीले आजको ...
सिरहामा १५ प्रतिशत बालबालिका कडा कुपोषणको शिकार
लहान, २३ पुस । सिरहामा करिब १५ प्रतिशत बालबालिका कडा कुपोषणको चपेटामा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ‘क्विक एसिस्टेन्ट’ नामक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार सिरहामा १५ प्रतिशत बालबालिका कडा कुपोषणको चपेटामा परेको देखाएको हो । गर्भवती महिलामा पोषणयुक्त खानाको अभाव, कामको ...
अस्पतालको सेवा उत्कृष्ट बनाउँदै लैजानुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति यादव
काठमाडौँ, २१ पुस । पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवालाई उत्कृष्ट बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रहरी अस्पतालमा ‘मिट दि पायनियर’ कार्यक्रमको आज शुभारम्भ गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले बिरामीसँगको असल व्यवहार बिना अस्पतालको सेवा उत्कृष्ट हुन नसक्ने ...
काठमाडौ २० पुस । नेपालकै मेडिकल कलेजबाट चिकित्साशास्त्रमा स्नातक (एमबीबीएस) गरेका ४१ प्रतिशत डाक्टर अति सामान्य मानिने लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएपछि मुलुकमा हुने पढाइको स्तरमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यति ठूलो संख्यामा चिकित्सकहरू फेल हुनुका पछाडि पढाइको स्तरमात्र नभई ...
कुपोषित बालबालिकाको उपचार गर्न झापा ओटिसी सेन्टर स्थापना
बनियानी, झापा, १८ पुस । कुपोषित बालबालिकाको पहिचान गरी उपचार गर्न ओटिसी सेन्टर स्थापना गरिएको छ । जिल्लाको १५ वटै स्थानीय तहमा ओटिसी सेन्टर स्थापना गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य प्रमुख मधुसूदन कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीयवासीको घरदैलोमै ...
नेपालमा २५ वटा औषधि उत्पादन कम्पनी मापदण्डविपरीत सञ्चालन
काठमाडौ १८ पुस । नेपालमा २५ वटा औषधि उत्पादन कम्पनी मापदण्डविपरीत सञ्चालन भईरहेको पाईएको छ । त्यस्ता कम्पनीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभाग भने मुकदर्शक बनेको छ । विभागका अनुसार मुलुकमा भिन्नभिन्न प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने ...
नर्भिक अस्पतालमा अत्याधुनिक एमआरआइ मेसिन सञ्चालनमा
काठमाडौ १२ पुस । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले ३ टेस्ला एमआरआइ र अत्याधुनिक प्रविधिसम्पन्न १२८ स्लाइस सीटी स्क्यान मेसिन थप गरेको छ । न्युुक्लिएर मेडिसिन सेन्टरका रुपमा परिणत गर्न थप एक अत्याधुनिक सीटी. स्क्यान र अत्याधुनिक एएमआरआइ सेवा थपिएको बताइएको ...
निःशुल्क शल्यक्रिया शिविरमा पहिलो दिन २५ जनाको शल्यक्रिया
इलाम, ११ पुस । इलाम सदरमुकाममा शुरु भएको मोतियाबिन्दु भएकाका लागि निःशुल्क शल्यक्रिया शिविरमा पहिलो दिन २५ जनाको शल्यक्रिया भएको छ । नेपाल नेत्रज्योति संघ इलामको आयोजना तथा विराटनगर आँखा अस्पतालको सहयोगमा तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने शिविरमा २०० भन्दा बढीको ...
धादिङ, ६ पुस । हात्तीपाइले लागेर समस्यामा परेका गाउँवासीले गाउँमा प्राविधिक नआएकाले आफूहरूले सरकारले तोकेको १७ मोडेलको घर सुधार गरेर भएपनि अनुदान दिन माग गरेका छन्् । इन्सेक र गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा गाउँवासीले भूकम्प प्रभावितका बनेका घरको ...
सेवाका नाममा चर्को शुल्क लिने अस्पतालविरुद्ध मुद्धा दायर गरिँदै
काठमाडौ ५ पुस । अस्पतालहरुले विभिन्न सेवाका नाममा चर्को शुल्क असुल्दै आएको फेला परेपछि सरकारले ती अस्पतालविरुद्ध मुद्धा चलाउने भएको छ । अनुगमन र बयानको क्रममा बिरामीबाट चर्को मुल्य असुलेको पुष्टि भएपछि आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले मुद्धाको ...
काठमाडौ २८ मंसिर । राजधानीका ठूला अस्पतालले बिरामीसँग गैरकानुनी रूपमा मोटो रकम असुल्ने गरेको फेला परेको छ। जनताले विश्वास गरेका अस्पतालहरूले नै बिरामीबाट पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म गैरकानुनी रकम असुल्ने गरेको फेला परेको हो। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट ...
बैतडीका स्वास्थ्य संस्थामा केही दिनदेखि आइरन चक्कीको अभाव
बैतडी, २२ मंसिर । बैतडीका स्वास्थ्य संस्थामा केही दिनदेखि आइरन चक्कीको अभाव भएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा आइरन चक्कीको अभाव हुँदा गर्भवती महिलालाई आइरन चक्की नदिएरै फर्काउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्वास्थ्य चौकीले जनाएका छन् । सिगास गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेको गाँजरी स्वास्थ्य चौकीमा आइरन ...
काठमाडौ १६ मंसिर । उपत्यकामा बर्सेनि २० वर्षभन्दा मुनिका करिब साढे ३२ सय किशोरीले गर्भपतन गराउने गरेका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको तथ्यांकअनुसार असुरक्षित यौनसम्पर्कबाट बसेको गर्भ सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गर्नेको संख्या धेरै बढेको छ । यो खबर अर्जुन ...
झापामा एचआइभी संक्रमितको संख्या वर्षेनी घट्दै
बनियानी, झापा, १५ मंसिर । झापामा एचआइभी संक्रमितको संख्या वर्षेनी घट्दै गएको छ । जिल्लामा २०७३ मा १६ जना एचआइभी संक्रमित भेटिएका थिए । विसं २०७२ मा ४३ जना एचआइभी संक्रमित फेला परेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत कुलबहादुर पौडेलले ...
भक्तपुर, १३ मंसिर । नेपालमा ४४ हजार क्षयरोगी छन् । तीमध्ये ३२ हजार बिरामी मात्र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सम्पर्कमा रहेको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले जनाएको छ । टिबीका बिरामीको अवस्था पत्ता लगाउन डब्लुएचओले सन् २०१६ का लागि गरेको सर्वेक्षणानुसार ४४ हजार ...
काठमाडौ ८ मंसिर । मुलुककै एकमात्र केन्द्रीय बाल अस्पतालमा राम्रो सेवा पाइएला र रोग निको होला भन्ने धेरैको आशा हुन्छ । तर कान्ति बाल अस्पतालको यथार्त अर्कै छ । यहाँ दुई नर्सले ५२ जनासम्म बिरामीलाई सेवा दिनुपर्छ । ...
काठमाडौँ, १६ कात्तिक । देशभरका बालबालिकालाई आज र भोलि भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका छ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र एक वर्षदेखि पाँच वर्षमुनिका २३ लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने ...
चितवन, ११ कात्तिक । एचआइभी संक्रमितलाई दिइदै आएको एआरटी औषधि अब संक्रमणको जोखिममा रहेकाले पनि पाउने भएका छन् । रगत परीक्षण गरी सिडीफोर भन्ने तत्वको मात्रा कम भएमा मात्रै औषधि दिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी सबै संक्रमित र संक्रमणको जोखिममा रहेकालाई ...
बनेपा, १० कात्तिक । एकै परिवारका चारजनाको मृत्यु हुने गरी बनेपामा भएको घटनाको तीन महिना बितिसक्दा पनि भिसेरा परीक्षणको रिपोर्ट आउन सकेको छैन । गत साउन ६ गते बनेपा–८ स्थित बसपार्कमा मृतावस्थामा फेला परेका दाहाल परिवारका चारजनाको भिसेरा परीक्षणको रिपोर्ट ...